Umatshini woQeqesho lwebhola
Siboasi kwi-Wuhan ye-3 yeWuhan yezeMidlalo yeHlabathi yezeMidlalo
ngomphathi ku 21-08-14
Ukusukela nge-15 ukuya kwi-17 ka-Okthobha, i-Wuhan ye-3 yeWuhan International Sports Industry Expo yabanjwa ngempumelelo kwiHubei Wuhan International Convention kunye neZiko leMiboniso (Hankou Wuzhan). Umboniso utsale ngaphezu kwe-400 ebonisa iimveliso ezivela ekhaya nakwamanye amazwe, kunye nabasasazi abaziingcali. Engaphezulu kwe ...
Umdlalo wamanqam wokugqibela wabasetyhini beOlimpiki: I-basketball yabasetyhini baseMelika ngukumkani
Nge-12: 40 emini ngo-Agasti 6, ixesha lase-Beijing, i-Olimpiki yabasetyhini ye-basketball yamanqam. Iqela elikhuselayo lebhola ekhatywayo labasetyhini baseMelika lajongana neqela labasetyhini bebhola yomnyazi. Iqela labasetyhini bebhasikithi yaseMelika lelona lihamba phambili. I-Oly yaseTokyo ...
Siyavuyisana noSiboasi kunye noMbutho weTennis waseChina ngokufikelela kubambiswano olucwangcisiweyo
ngomphathi ku 21-07-31
Ngo-Epreli 2019, uSiboasi kunye noMbutho weTennis wase China bafikelela kwisigqibo sokusebenzisana ekukhuthazeni uphuhliso oluqhelekileyo kwishishini lentenetya kumacala omabini amaqela. Emva kwale ntsebenziswano, uSiboasi uya kusebenzisana noMbutho weTennis waseTshayina kumatshini wokuqeqesha ibhola / i-equi ...
Iimpawu ezahlukeneyo zomatshini wokudubula weTennis
ngomphathi ku 21-07-23
Abadlali be-tennis, ukhetha njani uhlobo olufanelekileyo lomatshini webhola yentenet? Umatshini wentenetya olungileyo uya kuba liqabane elingcono ngesiqhelo iminyaka eli-10 ubuncinci. Kubathengi, mhlawumbi uninzi lwabo luza kujonga amaxabiso kuqala, kodwa ukuthenga umatshini wentenetya yokusebenzisa iminyaka emininzi, ujonge kuphela ...
Iimveliso zoqeqesho lwabantwana kwezemidlalo ziya kuba yimfuno engqongqo
ngomphathi ku 21-07-20
Imfundo ejolise kwiimviwo sele ithandwa e-China ixesha elide. Ngaphantsi kwempembelelo yengcinga yesiko "yolwazi olutshintsha ikamva", uluntu ngokubanzi lugxininisa imfundo yengqondo kunemfundo yomzimba. Ekuhambeni kwexesha, ingxaki yokunqongophala kolutsha kwimithambo ...
Thenga umatshini webhola yentenetya unokunceda ubuchule betenisi?
Abadlali beTennis baya kuhlala becinga ngendlela yokuphucula izakhono zabo. Umatshini woqeqesho lweTennis uya kuba lelona qabane liqeqeshayo ukusombulula le ngxaki. Sibonisa izibonelelo zokusebenzisa umatshini webhola yentenetya apha ngezantsi kwi-Ref yakho. Izinto eziluncedo zokusebenzisa umatshini webhola yentenetya: 1. Yiba negalelo t ...
Uthathe inxaxheba kwiSemina yokuBekwa emgangathweni yoMbutho weTennis waseTshayina Ukungena eKampus
ngomphathi ku 21-07-15
Ukusukela nge-16 kaJulayi ukuya kwi-18 kaJulayi, i-China Tennis Association encinci ye-tennis yokungena kwisemina yokumiswa komgangatho oququzelelwe yi-China Tennis Association Tanis Sports Development Centre ibibanjelwe e-Yantai, kwiPhondo lase Shandong. U-Wan Hou, uSihlalo weSiboasi Mnu Quan wakhokela amalungu ophando ...
Ibhola yomnyazi umatshini wokudubula othengisayo
Ukuba ujonge ukuthenga umatshini woqeqesho lwebhasikithi okanye ukuwenza ishishini, uze kwindawo elungileyo, singumvelisi oqeqeshiweyo wokuvelisa kunye nokuthengisa oomatshini boqeqesho oluphezulu lwebhasikithi ebesele ineminyaka sele ikhona. KuQeqesho lomatshini webasketball ...
Loluphi uphawu olucebisa kakhulu kumatshini webhola yentenetya?
Kukho iintlobo ezahlukeneyo kwintengiso yomatshini webhola yoqeqesho lwentenetya, uphawu ngalunye lunezibonelelo zalo, alunakuthi yintoni embi, yeyiphi eyona ilungileyo, kodwa ungatsho ukuba unokuhlangabezana neemfuno zakho, uphawu lulona lulungele wena. Namhlanje sincoma i-SIBOASI brand ye-tennis automati ...
Umatshini woqeqesho wentenetya okhethekileyo kwikhampasi yentenetya
I-Tennis ngumdlalo odibanisa ubuhle, imfashini kunye nempilo. Ayinawo nje kuphela umsebenzi wokomeleza umzimba, kodwa imeko yayo yenkcubeko yempucuko, imbeko kunye nesitayile senene nayo ikwakha iikhonsepthi ezilungileyo zemidlalo yabantu abathatha inxaxheba kulo mdlalo ngalo lonke ixesha, ...
Izinto eziluncedo ngomatshini wokuqeqesha u-SIBOASI
Izibonelelo ezinkulu zoomatshini bebhola yebhasikithi yebhasikithi ye-Siboasi xa kuthelekiswa noomatshini bangaphandle bohlobo lomnyazi: Okokuqala, ungathanda ukwazisa malunga nenkampani ye-Siboasi kuwe: I-Siboasi yasekwa ngo-2006, ebekwe eDongGuan, GuangDong, China, ukuvelisa kunye nokuthengisa oomatshini abanjengoTenni. ..
Intshayelelo yoMatshini weBhola yeTennis
Umsebenzi womatshini webhola yentenetya 1. Unokuseta ngokungekho semthethweni kwaye utshintshe izantya ezahlukeneyo, amaza, izikhombisi, amanqaku okwehla, kunye nokujikeleza koqeqesho lwendlela edibeneyo. 2. Ulawulo olukude lunokunqunyanyiswa ukugcina amandla xa uchola ibhola, kwaye irimothi ingafakwa kwi-po ...